Kedu otu esi eme atụmatụ ọnụahịa nkume? Ọhụrụ melite 2021. Nnukwu ndụmọdụ
Kedu otu esi eme atụmatụ ọnụahịa nkume?
Ọnụ ọnụ ala
Chọpụta nkume gị
Chọpụta àgwà gị dị elu
Chọpụta ahịa gị
Ewepu dayamọnd, ọ nweghị ezigbo ọnụ ahịa nkume ọnụ ahịa n'ụwa. Mba ụfọdụ na-anwa ịtọ iwu. Mana iwu ndị a bara uru naanị na mba ndị a. N’ọtụtụ mba ụwa, iwu anaghị adị.
Ọnụ nkume bụ naanị nsonazụ nke nkwekọrịta dị n'etiti onye na-ere na onye zụrụ ya. N'ezie, enwere ụkpụrụ ndị bụ isi maka ịtụle uru nkume bara nnukwu uru, nke akọwapụtara n'okpuru.
Mbụ, ị ghaghị ịchọpụta nkume gị, ya bụ, gịnị bụ ezinụlọ nke nkume ahụ? Kedu ụdị nkume dịgasị iche? Ọ bụ ihe okike ma ọ bụ ihe mgbakwunye?
Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ pụta na nkume ahụ bụ ihe okike, ajụjụ na-esonụ bụ: Ọ na-emeso ma ọ bụ na ọ bụghị?
Ọ bụrụ na emeso nkume gị, ajụjụ ọzọ bụ: Olee ụdị ọgwụgwọ e mere na nkume?
Ndị a bụ ndị mbụ nkeji ga - enye anyị ohere ịmalite ịkọwapụta ịdị mma nke okwute.
Ọ bụ ụdị ozi a ị ga-ahụ na asambodo niile nke ụlọ ọrụ ụlọ ọgwụ na-ekpuchi. Maka na ihe ndị a bụ ozi ị na-enweghị ike ịmata n'onwe gị ma ọ bụrụ na ị bụghị onye gemologist nwere ahụmahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ngwá ọrụ ịme ihe nyocha.
Ma nke a ezughị iji tụlee uru nke nkume.
Ozugbo a kọwapụtara nkume ahụ, a ghaghị ịkọwa ihe anọ ọzọ.
Nke mbụ bụ agba nke nkume dị egwu, nke abụọ bụ ihe doro anya nke nkume, nke atọ bụ àgwà nke ibelata nkume na nke anọ bụ ibu nke nkume ahụ.
Achọpụta ihe anọ a mara nke ọma na ahịa diamond, ma mmadụ ole na ole maara na iwu ndị ahụ na-emetụta ihe niile bara uru.
Mgbe ị chọpụtara nkume ahụ, a ka nwere otu isi iji chọpụta: ọnụ ahịa nkume na ahịa, dabere na ebe ị nọ na geographically na dị ka ọnọdụ gị na ahịa ahịa.
N'ezie, otu nkume yiri nke a kachasị ọnụ agaghị abụ ọnụ na mba ya ma ọ bụrụ na i jiri ọnụ ya tụnyere mba dị na nsọtụ ọzọ nke ụwa.
Na ngwụcha, ọnụ ahịa okwute ga-adịkwa iche dabere ma ị zụtara nkume dị egwu na ahịa ma ọ bụ reatail. Ọnụahịa ahụ ga-adịkwa iche na-adabere na nkume etinyeworị na ọla, ma ọ bụ na ọ bụghị.
N'ezie, dịka na akụnụba akụ na ụba, ihe ntanetị dị n'etiti onye na-emepụta ihe na nkume na onye na-azụ ahịa, nke dị elu karịa ọnụahịa.
Enweghị ndozi ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ ọnụahịa nke nkume, ị ga-eme nyocha ahịa maka onwe gị site na ịga izute ndị na-eweta nkume bara uru n'ebe ị nọ, yabụ, site na iji ọnụahịa ha atụnyere, ị ga-enwe echiche siri ike banyere ọnụahịa nke nkume dị egwu na-emetụta na mpaghara ala a, n'oge a.
Ọ bụ ọrụ na-adịgide adịgide n'ihi na ọnụahịa nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na isiokwu a, chọrọ ịga site na tiori na-eme, anyị na-enye gemology ọmụmụ.